Zvemukati Hazvigone Kuchinja Pasina Kudana-Ku-Kuita | Martech Zone
Zvemukati Hazvigone Kutendeuka Pasina Kudana-Ku-Chiito
Chishanu, June 14, 2013 Chishanu, June 14, 2013 Douglas Karr
Mwedzi wega wega Martech Zone yaizogadzira hombe tsama yemitungamiriri ye kutsigira, kushambadzira uye consulting mikana. Sezvo saiti irikuenderera ichikura mukuzivikanwa, zvakadaro, isu tanga tisiri kuona inotevera inotevera kuwedzera mune inotungamira. Ndakanga ndazove nazvo pakupedzisira - ini ndakaongorora saiti uye ndikaongorora kwaive kwedu kwekufona-kune-zviito zvaive mukati mese. Icho chinhu chatinobhadhara kutarisisa kwakawanda nevatengi vedu asi ini ndakanga ndakundikana kuongorora edu pachedu marongero akaiswa zvakanaka-kudaidzwa-kune-zviito.
Kune matatu chaiwo akaiswa ako ekufona-kune-chiito pane chero peji rakapihwa mukati mewebsite yako:
Mukati-Kurukova - iyi ndiyo CTA yakasimba, kuisa chinongedzo, bhatani, kana mufananidzo unoenderana nezvako zvemukati zvinoshandura avo vanofarira vari kuverenga zvemukati zvawakagovana.
Zvakare - iwe unozoona mamwe akasimba uye emira maCTA ari padyo nezvatinogutsikana. Isu takave nechokwadi chekuti ivo vari padhuze needu RSS feed, yedu nhare mbozha uye nharembozha zvedu, futi.
Site - aya akajairika maCAA akasarudzika kune zvigadzirwa uye masevhisi ako ebhizinesi anopa. Sezvo vanhu vachiramba vachiverenga zvemukati mako, vazhinji vanozoziva kuziva kuti ungavabatsira sei kuvashandira… saiti yakakura maCTA senge misoro yemusoro uye tsoka.
Kunze kweizvozvo, ehe, ndiwo mapeji ako ekumhara. Kumhara mapeji anofanirwa kuve kwaanoenda - kwete nzvimbo yemamwe maCTA uye sarudzo. Tichitarisa pane peji pane yako saiti, ako mapeji akavakwa neakasimba kufona-kune-zviito mu-kuyerera, padyo, uye kuyambuka saiti?
Hatisati taita izvozvi, asi isu takawedzera huwandu hwedu hwevatungamiriri kubva ~ 5 pamwedzi kusvika pamusoro pe 140 inotungamira pamwedzi. Ndiko kuvandudza-kwe-chati-kuvandudza! Uye pasina isu tichichinja vhoriyamu yevanhu vanoshanyira saiti. Saiti imwe chete, zvakafanana zvirimo… asi a 2,800% kuvandudzika mukutendeuka kungoita nekuona kuti kune mafoni-kune-chiito pane yega yega yezvinyorwa zvatinogadzira. Izvi hazvisi mu-chako-kumeso kubhenekera mabhana emashambadziro… iwo anongova mabhatani akareruka, girafu kana kunyange zvinyorwa zvemavara.
Kutsvaga kufona-ku-kuita mukati mezvako zvemukati uye saiti kunofanirwa kuve nyore. Vateereri vako havafanirwe kushamisika nezve chiito chavangazoite zvinotevera, ive shuwa Vaudze zvekuita zvinotevera. Ukavaudza, vanouya.
Is Social Midhiya Inotichinjisa Mune Psychopaths?